Psychedelic Horror 'Amai Asingaoneki' Kunze Izvozvi
musha Horror Varaidzo Nhau Psychedelic Horror 'Amai Asingaoneki' Kunze Izvozvi
by Waylon Jordan October 12, 2021 1,805 maonero
Tora rwendo kuburikidza neiyi psychedelic inotyisa / inonakidza kunze izvozvi paVOD.
Freestyle Dhijitari Midhiya yakawana iyo North America VOD kodzero dze Amai Asingaoneki, nyowani psychedelic inotyisa firimu kubva kumunyori uye director duo Jacob Gillman naMateu Diebler. Vaparidzi vakamboburitswa Dhimoni Imba nyeredzi Zak Bagans, Iyo Yeuka, Musikana muBhuku, Uye zvakawanda. Amai Asingaoneki anowanikwa izvozvi paApple TV uye nezvimwe zvekushambadzira.
Kubva pamafirimu ehurukuro. Amai Asingaoneki inotaurira nyaya yemutengesi wemadzvinyu, Marcy, nasekuru nasekuru vake, vachirwadziswa nemweya yepachechedelic yeakare foto album. Marcy anodzokera kumba kwasekuru nasekuru vake kunotsvaga gehena remweya zvipoko uye zviratidzo zve psychedelic, uye Marcy anofanira kusabvisa mitsara yezvokwadi kuponesa mhuri yake.
Mune ino mavara-akazara psychedelic thriller, Marcy, atanga arasa zviono izvi sechikamu chekushaya pfungwa kwaambuya vake, anokurumidza kukundwa nezvinotyisa zvake, achitambudzwa neicho chokwadi chinokanganisa uye mweya yevanhurume vanoita zvechisimba inopinda mumba make.
Asi kana chinhu chinouraya kubva pamufananidzo wemuVictorian chaba sekuru vake husiku, Marcy haana imwe sarudzo kunze kwekubatana naye eccentric yekumaodzanyemba belle muvakidzani, wake ice-cream-mutyairi-anotyaira masora mutengesi, ambuya vake vanorwara, uye foni inoshamisa. psychic kutarisana nerima denda pamberi pemunhu wese waanoziva akabvutirwa kuchipfuva chinouraya che Amai Asingaoneki.
Amai Asingaoneki inoratidzira cast inosanganisira Kiersten Warren (Zuva Resununguko), Debra Wilson (Scary Movie 4, Richard Riehle (Iyo Nhoroondo Yekumuka Maria), Brinke Stevens (The Slumber Party Kuuraya), naHelen Slayton-Hughes (Parks and Recreation).
Iyo firimu inotaridza pane epuratifomu mapuratifomu kutanga October 12, 2021.
Amai Asingaoneki anowanikwa izvozvi pano!
Kuti uwane rumwe ruzivo pa Amai Asingaoneki, vatevere Facebook & Instagram.
Tarisa uone trailer ye Amai Asingaoneki pazasi uye wozvitsvaga munguva pfupi padigital VOD kubva kuFreestyle Dhijitari Midhiya!